Gopi Krishna Dhungana (Pathik) : November 2014
Kos ma janasahabhagita
Bagmati Five Sutra
Labels: Lilamani Poudel
Jhamak Mrityu Barta
Labels: jhamak Ghimire
Gramin Sadak 1
Chhathi Mata 71
Labels: Baburam Madhav Nepal, Chhath, Prachanda, Upendra Yadav
छठीमातासँग शीर्ष नेताले मागे-संविधान बनाउने शक्ति
२०७१ कार्तिक १३ बिहीवार
काठमाडौं : अस्वस्थ, निसन्तान र विपन्नताबाट मुक्ति पाउने विश्वासका साथ सामूहिक रूपमा मनाइने छठ पर्वमा बुधबार अस्ताउन लागेको सूर्यलाई अर्घ दिँदै शीर्ष नेताहरूले संविधान बनाउने शक्ति मागेका छन्। रानीपोखरीमा बुधबार साँझ एमाले नेता माधव नेपाल, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता डा. बाबुराम भट्टराई तथा कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले सूर्यलाई अर्घ चढाउने क्रममा हातेमालो गर्दै समयमै संविधान बनाउने शक्ति मागेका हुन्।
नेपालले दाहाललाई संविधान बनाउन कसले कति 'कम्प्रोमाइज' गर्नुपर्ने हो त्यो गर्ने शक्ति मिलोस् भनेका थिए। सबै नेताले समयमै संविधान बनाउनुपर्ने विचार व्यक्त गरेका थिए। गुह्येश्वरी, बल्खु हुँदै साँझ ५.३५ बजे रानीपोखरी पुगेका राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले पनि सूर्यलाई अर्घ दिए।
नेपालले छठको अवसरमा बुधबार देखिएको रानीपोखरीको मनोरम दृश्यले सबै जातजातिबीच मेलमिलापको संकेत गरेको बताए। दाहालले छठले भाइचारा बढाउने काम गरेको बताए। महतले मिथिलाञ्चलवासीले तराईमा मनाउने छठ राष्ट्रिय पर्व बनिसकेको बताए।
नेताहरूप्रति टिप्पणी गर्दै एक वृद्धले भने, 'कमसेकम नेताहरूलाई पनि धर्म र संस्कृतिमा विश्वास र आस्था रहेछ। धर्मको रक्षा गरे आफ्नो पनि रक्षा हुन्छ भन्ने बुझेका रहेछन्। आज छठीमातासँग मागेको शक्तिले संविधान बनोस्।'
स्याङ्जा दरुङसिरुबारीबाट काठमाडौं आएका ६० वर्षीय खेम नेपालीले छठ पर्व पहिलोपटक दे न पाएको बताए। रानीपोखरीमा उनले भने, 'छठको महिमा सुनेर रमाइलो लाग्यो। छठमा सबै जातजातिलाई देख्दा अब हिमाल, पहाड, तराई, गाउँ र सहरबीच तालमेल मिल्न थालेको पाएँ।'
मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भगवान् राम र द्रौपदीसमेतले छठको व्रत लिएको स्मरण गर्दै सूर्यको उपासनाबाट प्राकृतिक रूपमा शक्ति प्राप्त गर्न सकिने भएकाले छठको महत्त्व रहेको बताए। अहिलेसम्म छठको व्रत नलिएको बताउने उनले भने, 'पछिल्ला वर्षमा देखासिकी, तडकभडक, खर्च र आडम्बर देखाउन थालिएको छ, यो राम्रो होइन।'
उपत्यकाका पोखरी र नदीकिनारमा जम्मा भएर भक्तजनले बुधबार साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिए। पोखरी र नदीकिनार झकिझकाउ पारिएका छन्।
१५ वर्षदेखि छठ व्रत लिँदै आएकी सर्लाही मानपुर हर्पुवाकी सुधा कर्ण यस वर्ष पनि व्रत बसेकी छन्। उनलाई पति शिलाकान्त झाले सघाउँदै आएका छन्। त्रिचन्द्र क्याम्पसमा २८ वर्षदेखि अध्यापनरत सहप्राध्यापक कर्णले भने, 'पत्नीले निरन्तर छठको व्रत लिएर परिवारमा खुसी छाएको छ, कोही अस्वस्थ छैन। छठीमाताले शक्ति दिनुभएको छ।' व्रत बसेकी सबिता जैसवालले भनिन्, 'छठ परम्परा हो, विश्वास हो। भाकल पूरा हुने भएकाले यसको महत्त्व छ।'
रानीपोखरीमा आठ वर्षअघि छठ सुरु गर्ने महापर्व छठ समारोह समितिका अध्यक्ष रामचन्द्र शाहले भने, 'बिहीबार बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर यो वर्षको छठ सकिनेछ।' बिहान उपराष्ट्रपति परमानन्द झा रानीपोखरी पुगेर अर्घ दिने कार्यक्रम छ।
- See more at: http://annapurnapost.com/News.aspx/story/1565#sthash.PXQbXBka.dpuf
Labels: उपेन्द्र, छठ, पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम, माधव नेपाल, रानीपोखरी, रामशरण महत
Ankur ma Lead
Labels: Ankur, lead, Ramcharitra Shah
Labels: lead, ram charitra shah, student
Labels: local development
लिभिङ टुगेदरले भत्कायो सिउँदो सजाउने सपना
काठमाडौं : डेढ महिनादेखि सँगै बसेकी सम्झना फुँयालको केही समयदेखि एउटै सपना थियो, विवेक सिंहको हातबाट सिउँदोमा सिन्दूर सजाउने। विवेकको दाजु र सम्झनाकी दिदी साथी भएकाले सोहीक्रममा चिनाजान भएपछि सिन्धुली डुम्रेबासकी २२ वर्षीया सम्झना र सप्तरी जगतपुर ९ का २२ वर्षीय विवेकबीच छ महिनादेखि 'अफेयर' चलेको थियो। तिहारका लागि गाउँ पुगेर शनिबार बिहान ११ बजे भक्तपुर गठ्ठाघरस्थित डेरामा पुग्दा विवेक छाँगाबाट खसेझैं भए, जब उनले प्रेमीका सम्झनाले झुण्डिएर आत्महत्या गरेको देखे।
'मलाई सिन्दुरले सजाइदेउ विवेक भन्थिन्, धेरैपटक भन्दा पनि मैले जागीर राम्रो होस् त्यसपछिमात्र विवाह गरौंला भनेको थिएँ तर उनले केही साताअघि आफैं सिन्दुर र पोते किनेर ल्याएकी थिइन्। कोठामा बस्दा र वरपर हिँड्दा लगाउँथिन्', विवेकले कार्यालयजाँदा सिन्दुर र पोते नलगाएको बताउँदै अन्नपूर्णसँग भने, 'मलाई पनि अरूले विवाह गरेर बसेका रहेछन् भन्ने भयो भने उत्तर दिइरहनु पर्दैन भनेर ठिक लगाउँदै गर, चाँडै विवाह गरौंला भन्थें।' विवेकका अनुसार, स्वास्थ्य विषय लिएर बिएड गरेकी सम्झना जडिबुटीस्थित एक्साइड ब्याट्रीको कार्यालयमा रिसेप्सनिष्टका रूपमा काम गर्थिन्।
प्लस टु पढिसकेको बताउने विवेकले भने पार्ट टाइमका रूपमा टेक्निसियनको काम गर्ने बताए। उनले काम गर्ने क्रममा कोठामा ल्याएका पुराना कम्प्युटरका केही तार राखेका थिए। उनलाई पत्तोसम्म थिएन, प्रेमीका बिजुलीको प्लकमा जोड्ने त्यही तारमा झुण्डिएर आत्महत्या गर्लिन् भनेर। बिहान साढे ८ बजे कलंकी उत्रिएर कोठामा पुग्दा कोठाको ढोका बन्द थियो। उनले बाहिरको शौचालय प्रयोगपछि धेरैपटक ढक ढक गर्दा पनि ढोका नखुलेपछि उनलाई शंका भयो। भने, 'चामलको बोरा चोकमै राखेको छु, कोठाबाट दुवैजना गएर ल्याउँला भनेर। ढोका नखुलेपछि पछाडिबाट अर्को ढोकामा पुगेर झ्यालबाट चिहाउँदा झुण्डिएको देखें'
'चुकुल अल्झाएको अवस्थाको ढोका हत्तपत्त खोलें, बचाउन सक्छु कि भन्ने लागेर भूइँमा लडाएँ र मुखबाट श्वास दिन थालें तर उनीले त छोडिसकेकी रहिछन्', पछाडिको ढोकामाथिको ग्रीलमा झुण्डिएको बताउँदै विवेकले भने, 'क ल्पनासम्म नगरेको घटना देख्दा यति नर्मस भएँछु कि त्यसो गर्न हुन्न भन्ने नै भएन। उनले यस्तो त नगर्नु पर्ने नि। विश्वासै छैन यस्तो भइसक्यो भनेर।' उनका अनुसार, सम्झनालाई माइती पक्षबाट 'किन गइस्?', 'बिहे गरेकै छैन त्यसरी बस्न हुँदैन' भन्दै टर्चर दिन्थे।
माइतीबाट भनिएका सबै कुरा सम्झनाले नसुनाउने विवेकको भनाइ छ। विवेकको सँगै कोठामा बस्ने ७० वर्षीया इमकुमारी घिमिरेले सम्झना र विवेकबीच सुमधुर सम्बन्ध रहेको बताइन्। 'डेढ महिनाजति भयो सँगै बसेको तर कहिल्यै झगडा त के रिसाएको पनि देखिनँ। हिजोमात्र सम्झनाको काकाको छोरो तिहारको रोटीहरू लिएर आएका थिए', उनले भनिन्, 'साँझसम्म सम्झना हसिखुसी नै थिइन्। बिहान सधैं ९ बजेमात्र उठ्ने भएकाले हामीलाई वास्तै भएन। साँझको खाना भएर तताएर खाएर अफिस जान्थिन् नभए त्यसै हिँड्थिन्।'
सम्झना र विवेकबीच शुक्रबार साँझ अन्तिमपटक फोन सम्पर्क भएको थियो। विवेकले भने, 'मसँग काठमाडौं आउने भाडा नभएकाले चार पाँच दिनपछिमात्र आउँछु भनेको थिएँ। भाडा भएपछि रात्रिबस चढेर आवाज सुनाउँदै म भोलि बिहान आइपुग्छु है भनेर फोन गरें तर उनले पत्याएकी थिइन्। झुटो किन बोलेको भनिन्।' त्यसपछि सम्झनाले चार पाँच पटक मोबाइलमा फोन गरेको तर आफूले थाहा नपाएको उनले बताए।
'बिहानै सरप्राइज दिन्छु भनेर मैले पनि फोन गरिनँ तर उनैले मलाई सरप्राइज दिइन्', विवेकले भने। उनका अनुसार, माइतीबाट धेरैपटक फोन गरेकाले दसैंमा सम्झना गाउँ गएकी थिइन्। उनले भने, 'उताबाट फोन आउँदा उनी म उसैसँग विवाह गर्छु भनिरहन्थिन्।' उनीहरू नवराज कोइरालाको घरमा डेरा बस्दै आएका थिए।
सम्झनाका दाजु राजेन्द्रले बहिनीलाई घरपरिवारले अध्ययन पूरा नभएको र भविष्य सुरक्षित बनाउन तत्काल विवाह नगर्न सल्लाह दिएको बताए। उनले भने, 'यसलाई माइतीले टर्चर दिएको भन्न मिल्दैन। पछि अर्को मान्छे भेटिन्छ हतार नगर भनेका थियौं।' दसैंमा एक रातका लागि घर पुगेर फर्किएकी सम्झनासँग पुन: टेलिफोन सम्पर्क नभएको उनले बताए। भने, 'पोष्टमार्टमको रिपोर्ट अनाउञ्जेल कसैलाई केही भन्न सक्ने अवस्था छैन।' मुचुल्काका लागि टोलीसहित घटनास्थल पुगेको महानगरीय प्रहरी वृत्त ठिमीका प्रहरीनिरीक्षक हर्कबहादुर कार्कीले भने, 'प्रारम्भीक अध्ययनले आत्महत्या गरेको देखिएको छ तर पोष्टमार्टमको रिपोर्ट नआई केही भन्न सकिन्नँ।'
Labels: लिभिङ टुगेदर
Siudo Sajaune Sapana
Labels: Siudo Sajaune Sapana